Bit By Bit - Idebe ihe omume - 2.3.6 anaghị akọwa akwụkwọ
Ihe ndị na-adịghị akọwapụta ihe dị njọ maka nchịkọta akụkọ na-apụtaghị ìhè, mana enwere ike ịba uru dị ukwuu maka ntinye ihe atụ.
Ụfọdụ ndị ọkà mmụta sayensị na-elekọta mmadụ na-ejikarị data na-arụ ọrụ na-esi na ngwongwo na-enweghị atụ site na obodo a maara nke ọma, dị ka ndị okenye niile nọ n'otu mba. A na-akpọ ụdị data a data nnọchiteanya n'ihi na ihe atụ "na-anọchite anya" ọnụ ọgụgụ ka ukwuu. Ọtụtụ ndị na-eme nchọpụta na-ahụ maka ihe nnọchiteanya nnọchiteanya, yana ụfọdụ, ihe nnọchiteanya ndị nnọchianya jikọtara ya na sayensị dị mgbagwoju anya na ihe ọmụma ndị na-abụghị ndị na-ekwu okwu dịka mkparị. N'okwu kachasị oke, ụfọdụ ndị nwere obi abụọ yiri ka ha kwenyere na ọ nweghị ihe a ga-amụta site na ozi data ndị na-abụghị ihe. Ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu, nke a ga - eyi ka ọ ga - esi ike ịma ihe ndị a ga - amụta site na isi mmalite data n'ihi na ọtụtụ n'ime ha abụghị ndị na - anọchite anya ya. Ọ dabara na, ndị a na-arụ ụka bụ naanị otu akụkụ. E nwere ụfọdụ ihe mgbaru ọsọ nyocha nke nkọwa data na-abụghị nke na-akọwaghị nke ọma, ma e nwere ndị ọzọ nke ọ ga-abụ nnọọ uru.
Iji ghọta nke a dị iche iche, ka anyị tụlee ihe ọmụmụ sayensị: nchọpụta John Snow banyere ọrịa ntiwapụ nke ọrịa na 1853-54 na London. N'oge ahụ, ọtụtụ ndị dọkịta kwenyere na ọ bụ "ikuku ọjọọ" kpatara ọrịa cholera, ma Snow kwenyere na ọ bụ ọrịa na-efe efe, ikekwe na-agbasa site na mmiri ọṅụṅụ na-ekpuchi mmiri. Iji nwalee echiche a, Snow jiri uru nke ihe anyị nwere ike ịkpọ ugbu a nyocha. O jiri onu ogugu cholera nke ezinulo nke ulo oru di iche iche bu: Lambeth na Southwark & ​​Vauxhall. Ụlọ ọrụ ndị a na-arụ ọrụ ndị yiri nke ahụ, mana ha dị iche n'otu ụzọ dị mkpa: na 1849-afọ ole na ole tupu ọrịa ahụ amalite-Lambeth kpaliri ebe obibi ya site na isi mmiri ahụ na London, ebe Southwark & ​​Vauxhall hapụrụ ihe mgbapụta na-esi na mbupu mmiri ozuzo. Mgbe Snow jiri ọnwụ tụnyere ọnụ ọgụgụ ndị nwụrụ anwụ na ezinụlọ ndị ụlọ ọrụ abụọ ahụ na-arụ ọrụ, ọ chọpụtara na ndị ahịa nke Southwark & ​​Vauxhall-ụlọ ọrụ nke na-enye ndị ahịa mmiri mmiri na-ekpochasị mmiri na-ekpochasị mmiri-dị ka okpukpu iri karịa ka ọ ga-anwụ site na ọnyá ọgbụgba. Nsonaazụ a na-enye ihe omumu sayensi siri ike maka arụmụka Snow banyere ihe kpatara ọnyá ọgbụgba, ọ bụ ezie na ọ bụghị dabere na ndị nnọchiteanya nke ndị nọ na London.
Ihe data sitere na ụlọ ọrụ abụọ a, ọ dịghị mma maka ịza ajụjụ dị iche: gịnị kpatara ọnyá ọgbụgba na London n'oge ntiwapụ ahụ? Maka ajụjụ nke abụọ, nke bụkwa ihe dị mkpa, ọ ga-aka mma inwe onye nnọchiteanya nke ndị si London.
Dị ka ọrụ Snow na-egosi, e nwere ụfọdụ ajụjụ sayensị nke data ndị na-abụghị ndị na-ede akwụkwọ nwere ike ịdị irè ma enwere ndị ọzọ na-ezighi ezi. Otu ụzọ aghụghọ iji chọpụta ụdị abụọ abụọ a bụ na ụfọdụ ajụjụ gbasara ihe atụ na-atụle ụfọdụ na ụfọdụ na-ekwu banyere usoro mkparịta ụka. Nke a nwere ike ịkọwa ọzọ nke ọma site na nchọpụta ọzọ a kpochapụla na epidemiology: Nkà Mmụta Dọkịta Britain, bụ nke na-ekere òkè dị mkpa n'igosi na ise siga na-akpata ọrịa kansa. Na ọmụmụ ihe a, Richard Doll na A. Bradford Hill soro ihe dịka puku 25,000 ndị dọkịta ruo ọtụtụ afọ ma jiri ọnụ ọgụgụ ọnwụ ha tụnyere ego ha na-ese anwụrụ mgbe ọmụmụ ahụ malitere. Doll na Hill (1954) chọtara mmekọrịta siri ike nke na-ekpughe ihe: ebe ndị mmadụ na-ese siga, otú ahụ ka ha ga-anwụ site na kansa cancer. N'ezie, ọ ga-abụ ihe amamihe na-adịghị na ya iji chọpụta na ọrịa cancer na-efe efe na-eme n'etiti ndị Britain nile dabeere na ìgwè ndị nwoke ndị dọkịta, mana nchịkọta dị n'ime-ka na-enye akaebe na ịṅụ sịga na-akpata ọrịa akwara.
Ugbu a na egosipụtara m ọdịiche dị n'etiti ntụgharị ntinye na ntinye ihe nlekọta, nchịkọta abụọ dị n'usoro. Nke mbụ, enwere ajụjụ gbasara ọdịdị nke mmekọrịta nke na-etinye n'ime ihe atụ nke ndị dọkịta nwoke Britain ga-ejidekwa n'ime ụmụ nwanyị, ndị dọkịta Britain ma ọ bụ ndị ọrụ ụlọ ọrụ Britain ma ọ bụ ndị ọrụ ụlọ ọrụ German ma ọ bụ ọtụtụ ndị ọzọ. Ajụjụ ndị a na-adọrọ mmasị ma dị mkpa, ma ha dị iche na ajụjụ banyere ókè anyị nwere ike isi na-atụle site na sample ruo otu ọnụ ọgụgụ. Rịba ama, dịka ọmụmaatụ, na ị nwere ike iche na mmekọrịta dị n'etiti ịṅụ sịga na ọrịa kansa nke a na - achọta na ndị dọkịta nwoke bụ ndị Britain nwere ike ịdị yiri ndị ọzọ. Ikike gị ime nke a na-esiteghị n'eziokwu ahụ bụ na ndị nwoke bụ ndị Britain bụ ndị na-enweghị ihe ọghọm na-enweghị atụ site n'aka ndị ọ bụla; kama, ọ na-abịa site na nghọta nke usoro nke na-ejikọta ise siga na ọrịa kansa. Ya mere, nchịkọta nke sitere na sample nke ndị mmadụ na-esite na ya bụ nke a na-esite n'akụkọ ihe omimi, ma ajụjụ banyere transportability nke usoro dị na otu otu na otu ọzọ bụ ihe na-abụghị nke a (Pearl and Bareinboim 2014; Pearl 2015) .
N'oge a, onye nwere obi abụọ nwere ike ịkọwa na ọtụtụ ihe gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya nwere ike ịbụ ndị na-adịghị ebugharị na-agafe dị iche iche karịa mmekọrịta dị n'etiti ịṅụ sịga na ọrịa kansa. M kwenyekwara. Ogologo ihe anyi kwesiri icho anya na ihe ndi ozo bu ihe omumu sayensi nke a ghaghi ikpebi dabere na akwukwo na ihe akaebe. Okwesighi ka eburu n'uche na usoro a ga-ebughari, ma o kwesighi ka ewere ya na ha agagh enwe ike ibughari. Ajuju ndia ajuju banyere transportability ga ama gi nke oma ma oburu na i sooro ugbua banyere otutu ndi nyocha nwere ike imuta banyere omume mmadu site n'inyocha umu akwukwo di iche iche (Sears 1986, [@henrich_most_2010] ) . N'agbanyeghị arụrịta ụka ndị a, Otú ọ dị, ọ ga-abụ ihe ezi uche na-adịghị na ya ikwu na ndị na-eme nchọpụta enweghị ike ịmụta ihe ọ bụla site n'ịmụ ụmụ akwụkwọ ọganihu.
Nkọwa nke abụọ bụ na ọtụtụ ndị na-eme nchọpụta na-akọwaghị ihe ndekọ na-abụghị ndị nlezianya dị ka Snow ma ọ bụ Doll na Hill. Ya mere, ịkọwa ihe nwere ike ịme ihe ọjọọ mgbe ndị na-eme nnyocha gbalịrị ịkọwapụta ihe na-abụghị nke ndị mmadụ na-akọwa, m ga-agwa gị gbasara nyocha nke ntuli aka nzuko omeiwu Germany nke 2009 na Andranik Tumasjan na ndị ọrụ (2010) . Site n'inyocha ihe karịrị 100,000 tweets, ha chọpụtara na ọnụ ọgụgụ nke tweets na-ezo aka na ndọrọ ndọrọ ọchịchị kwekọrọ na ọnụ ọgụgụ nke ndị natara na nhoputa ndi omeiwu (nọmba 2.3). N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, o yiri ka data Twitter, bụ nke bụ n'efu, nwere ike dochie anya nyocha ndị ọha na eze na-eme, nke dị oké ọnụ n'ihi na ha kwusiri ike na data nnọchiteanya.
N'inye ihe ị maaraworị banyere Twitter, ị ga-enwe obi abụọ ugbu a maka nsonazụ a. Ndị Germany na Twitter na 2009 abụghị ihe atụ nke ndị votu na Germany, ndị na-akwado ndị ọzọ nwere ike itinye aka na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọtụtụ ugboro karịa ndị na-akwado ndị ọzọ. Ya mere, ọ dị ka ijuanya na ihe niile ị ga-eche n'echiche nwere ike ịkagbu ya ka o wee bụrụ na data a ga-egosipụta na ndị votu Germany. N'ezie, ihe si na Tumasjan et al. (2010) wee pụta ìhè na ọ gaghị adị mma. Akwụkwọ akụkọ ndị Andreas Jungherr, Pascal Jürgens, na Harald Schoen (2012) mere ka o doo anya na nchịkọta mbụ ahụ ewepụla ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke natara eziokwu kachasị na Twitter: Òtù Pirate, obere òtù na-alụ ọgụ maka iwu gọọmentị nke Intanet. Mgbe a na-atụle Pirate Party na nyocha ahụ, Twitter na-aghọ onye na-ahụ egwu nke nsonaazụ ntuli aka (nọmba 2.3). Dịka ihe atụ a na-egosi, iji nnukwu ihe ọmụma data na-abụghị ndị na-edepụta ihe iji mee nchịkọta akụkọ zuru oke nwere ike ịga nnọọ njọ. Ọzọkwa, ị ga-achọpụta na eziokwu 100,000 tweets dịchaghị mkpa: ọtụtụ nchịkọta akụkọ na-abụghị nke na-abụghị ndị na-abụghị ndị nnọchianya, isiokwu m ga-alaghachi n'isi nke atọ mgbe m na-atụle nyocha.
Nkeji 2.3: Nkọwa Twitter yiri ka ịkọ ihe nrite nke ndị ntuli aka German 2009 (Tumasjan et al. 2010) , ma nke a anaghị eme ka otu n'ime ndị ọzọ mara: Pirate Party (Jungherr, Jürgens, and Schoen 2012) . Lee Tumasjan et al. (2012) maka esemokwu maka ịhapụ ndị Pirate Party. E si na Tumasjan et al. (2010) , tebụl 4 na Jungherr, Jürgens, and Schoen (2012) , tebụl 2.
Iji mechie, ọtụtụ nnukwu isi data esiteghị na ihe nnọchiteanya nke ụfọdụ ndị akọwapụtara nke ọma. Maka ajụjụ ndị na-achọ ịkọwapụta ihe si na ntanetịpụtara nye ndị mmadụ si na ya dọta ya, nke a bụ nnukwu nsogbu. Ma maka ajụjụ banyere nyochaa n'ime ihe atụ, data ndị na-adịghị akọwapụta ihe nwere ike ịdị ike, ọ bụrụhaala na ndị nchọpụta doro anya banyere njirimara nke ihe nlele ha na nkwado ha na-ekwu banyere transportability na njirimara ma ọ bụ ihe omuma. N'ezie, olile anya m bụ na nnukwu ihe ọmụma data ga-enyere ndị nchọpụta aka ịme ihe ndị ọzọ na-egosiputa na ọtụtụ ndị na-abụghị ndị na-edepụta akwụkwọ, m na-echekwa na atụmatụ ndị dị iche iche dị iche iche ga-eme ihe iji kwalite nchọpụta mmekọrịta karịa otu atụmatụ si na random random nlele.